Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Saint Lucia » Fanavaozana an'i Saint Lucia amin'ny rivodoza Elsa
Vaovao Mafana • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Resorts • Safety • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny zoma 2 Jolay, nandalo ny nosin'i Saint Lucia ny sokajy 1 ny rivodoza Elsa. Ny fanombanana hijerena ny haavon'ny fiantraikany manerana ny nosy dia nitranga taorian'ny nandalovan'ny rivodoza.
Tsy nitondra fahasimbana lehibe tamin'ny fotodrafitrasa fizahan-tany ilay rivo-doza.
Nisy kaomandy All Clear navoaka tamin'ny 9:45 alina tamin'ny 2 Jolay avy amin'ny National Emergency Management Organisation (NEMO).
Niverina tanteraka ny fizahantany sy ny seranam-piaramanidina androany maraina.
Saint Lucia Air and Sea Ports Authority (SLASPA) dia nitatitra fa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hewanorra (UVF) sy ny seranam-piaramanidina George FL Charles (SLU) dia nanohy ny asany ara-dalàna tamin'ny 10 maraina maraina noho ny fahatongavany sy ny sidina niaingany. Entanina ireo mpandeha mba hijery miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana raha mila fanavaozana. Amin'ny ezaka hanatsarana ny ora fanodinana, amporisihina ny mpandeha hanamarina mialoha.
Fikambanan'ny Saint Lucia Hospitality & fizahantany (SLHTA) dia nitatitra fa ny hotely sy ny trano fandraisam-bahiny dia miaina tsara ary tsy misy fahasimbana ny fananana. Mandeha ny fanadiovana kosmetika eny amin'ny toerana misy ifandraisany amin'ny fizahantany. Ny vahiny hotely dia nokarakarain'ny ekipa eny an-toerana ary tsy manana ahiahy ao anatin'ny trano fandraisam-bahiny tsirairay avy.
Ny toetr'andro sy ny orana dia niteraka fahasimbana nanerana an'i Saint Lucia ary ny herinaratra dia mbola naverina amin'ny laoniny any amin'ireo faritra nitrangan'ny fahatapahana. Ny tambajotram-pifandraisana dia heverina ho azo antoka hamakivaky ny minisiteran'ny fotodrafitrasa. Tsy misy tatitra momba ny fahatapahana amin'ny famatsian-drano.
Hanaiky ny voka-dratsy mandritra ny fotoana fohy ny minisiteran'ny Fahasalamana Covid-19 Ny valin'ny fitsapana PCR dia mihoatra ny 5 andro ho an'ireo mpandeha tonga any Saint Lucia hatramin'ny alahady 4 Jolay 2021 fotsiny. Ity fanilihana vonjimaika ity dia hanamorana ireo mpandeha tratry ny rivodoza Elsa. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny kavina Covid-19 sy ny fidirana ao amin'ny Saint Lucia, tsidiho azafady www.stlucia.org/covid-19.
Mba hahazoana ny vaksiny feno, ny mpandeha dia tsy maintsy nanana ny fatra farany vaksinin'ny COVID-19 roa na vaksinina iray fatra roa herinandro (14 andro) alohan'ny dia. Ireo mpitsangatsangana dia hanondro fa vita vaksiny tanteraka izy ireo rehefa mameno ny taratasy fahazoan-dàlana momba ny Travel alohan'ny fahatongavana, ary mampakatra ny porofon'ny vaksiny. Ireo mpitsidika dia tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny kara-panefiny na ny antontan-taratasy. Rehefa tonga ao Saint Lucia, ireo mpitsidika vita vaksiny feno voasoratra anarana dia hanafaingana amin'ny alàlan'ny tsipika fanaraha-maso momba ny fahasalamana ary homena fehin-tanana tsy misy elektronika mandritra ny fotoana ijanonany. Ity fehin-tànana ity dia tsy maintsy atao mandritra ny fijanonana ary esorina rehefa miala ao Saint Lucia.
Ireo mpitsangatsangana tsy vita vaksiny dia havela avela hijanona hatramin'ny fananana roa voamarina mandritra ny 14 andro voalohany ary ireo teratany miverina tsy vita vaksiny dia takiana mangataka quarantine mandritra io fotoana io.